प्रदेश–७ कै सबैभन्दा ठूलो सभागृह भएको सिटी हल तयार | Suvadin !
विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधिन सिटी हलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको महेन्द्रनगर विकास समितिका इञ्जिनियर मोहनदेव अवस्थीले बताए। उनका अनुसार विद्युत जडान र सरसफाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चाँडै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै इञ्जिनियर अवस्थीले भने, ‘विद्युत जडानको लागि विद्युत कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं, अबको करिब दुई हप्ताभित्रमा पूर्ण रुपले निर्माण सम्पन्न हुन्छ।’
Jun 13, 2018 10:53
Shared: 557 times | Share this on
मदन गिरी, महेन्द्रनगर, ३० जेठ – महेन्द्रनगर विकास समितिले निर्माण गरिरहेको सिटी हलको निर्माण सम्पन्न हुन लागेको छ। सञ्चालनमा आएपछि यो सभागृह प्रदेश–७ कै ठूलो सभागृह हुने छ।
विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधिन सिटी हलको निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको महेन्द्रनगर विकास समितिका इञ्जिनियर मोहनदेव अवस्थीले बताए। उनका अनुसार विद्युत जडान र सरसफाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
चाँडै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै इञ्जिनियर अवस्थीले भने, ‘विद्युत जडानको लागि विद्युत कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं, अबको करिब दुई हप्ताभित्रमा पूर्ण रुपले निर्माण सम्पन्न हुन्छ।’
सिटी हलमा थ्री फेजको विद्युत लाइन जडान गर्नुपर्ने भएकाले ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि विद्युत कार्यालयसँग समन्वय गर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ।
ट्रान्सर्फमरका लागि विद्युत कार्यालयलाई १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताउँदै उनले भने, ‘टान्सर्फमर खरिद भइसकेका छन्, आवश्यक मिटर परीक्षण पनि भइरहेको छ।’
सिटी हल निर्माणका लागि ८ करोड ९३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म सात करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निर्माणका लागि श्यामसुन्दर गौरी पार्वती जेभी कम्पनीसँग २०६५ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
नेपालकै दोस्रो ठूलो तथा सात नम्बर प्रदेशकै ठूलो भनिएको निर्माण भएपछि ठूला सेमिनार, गोष्ठी, सभा समारोह, सम्मेलनका कार्यक्रम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिटी हलमा सभाहल, बालकोनी, मिनी हल, स्टेजलगायत रहेका छन्।
हलमा १ हजार जना अट्ने एउटा सभागृह, २ सय जना अट्ने बालकोनी, ८ सय जना अट्ने मुख्य हल, २ सय जना अटाउने मिनी हल र ड्रेसिङ रुम निर्माण गरिएको ईन्जिनियर भट्टले बताएका छन्।
वि.सं. २०६५ सालबाट निर्माण शुरू भएको सिटी हलका लागि पाँच पटक म्याद थप गरिएको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण २०६७ असोजसम्म सक्ने लक्ष्य लिइएपनि समयमै काम नहुँदा पाँच पटक म्याद थप भएको समितिका सूचना अधिकारी तथा नायव सुब्बा पुष्पराज भट्टले बताएका छन्।
२ वर्ष ६ महिनामा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएपनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पहिलो पटक २०६८ जेठ २ गते ६ महिनाको अवधिमा निर्माण गर्ने गरी समय थप गरिएको थियो।
पहिलो पटकको थप गरिएको समय अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि दोस्रो पटक वि.सं. २०६८ असोज २९ गते ३ महिना समय थप गरिएको थियो। तर, दोेस्रो पटक पनि सिटी हल निर्माण हुन नसकेपछि २०६९ पुस १ गते तेस्रो पटक समय थप गरिएको थियो।
तेस्रो पटकको लक्ष्य पूरा नभएपछि २०७२ साउन १३ गते समय थप गरियो। तर, निर्माण नसकिएपछि २०७३ कात्तिक २७ गते चौँथो पटक म्याद थप गरिएको थियो। अहिले पाँचौ पटक थप भएको म्याद अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य लिएको नायब सुब्बा पुष्पराज भट्टले बताएका छन्।
समय समयमा नगर विकास समिति परिर्वतन हुने र समितिको कामकाज रोक्का भएकाले काम ढिलो भएको बताउँदै भट्टले भने, ‘ठेकेदारका कमजोरीका कारणले पनि ढिलाई हो।’
बाह्य निर्माणको अत्तोपत्तो छैन। सभागृहको भित्री भाग निर्माण पूरा भए पनि बाहिरी भाग कहिले बन्ने भन्ने यकिन छैन। पार्किङ, गार्डेन र सजावटका कामका लागि बजेट नै विनियोजन भएको छैन।
बाह्य भाग तयार नभए सिटीहल कुरुप देखिने छ। मुख्य गेटबाट हलसम्मको बाटोका लागि समेत योजना नभएको बताइएको छ। नवनिर्मित सिटीहलको छत पनि कुरुप निर्माण भएको छ।